नेपालदृष्टि । ऊ हातभरि माछाको सिल बोकेर म भएतिर आइरहेको थियो । उसले मलाई हे¥यो र नबोलेरै घरभित्र भान्छा कोठामा सरासर गयो । मैले पनि नयाँ अनुहारलाई राम्ररी ख्याल गरिनँ । फेरि जुरुक्क उठेँ र आफ्नै आँगन छेउमा रहेको एक टहरोमा गएँ । भान्साबाट मेरी सासूआमा बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । “नानी, ए नानी, यता आऊ त । यहाँ तिमीलाई कसले के ल्याइदिएको छ ।” मैले बुझिनँ । किनकि उहाँ त बिहे गरेको एक हप्ता दिनमै काठमाडौँ गइसक्नुभएको थियो । अरू कसले के ल्याइदिनुभएछ त ! म आश्चर्यमा परेँ । आमाले उही माछाको सिल देखाउँदै भन्नुभयो : “नानी यो तिमीलाई ठाकुले ल्याइदिएको रे ।” म अचम्ममा परेँ । मलाई माछा मनपर्ने कुरा कसरी यसले थाहा पाएछ त ? मैले नबुझेरै फेरि सोधेँ : “कसले आमा ? के कुरा आमा ?” आमाले फेरि पनि माछाको सिल मतिर देखाउँदै भन्नुभयो : “ठाकुले के त, तिमी नयाँ भाउजूलाई कोसेली ल्याइदिएको रे । कि के ठाकु ?”
त्यो दिन मैले र बुबा मिलेर माछा पकायाँै । बुबा भन्दै जानुहुन्थ्यो, म सोही अनुसार गर्दै जान्थेंँ । अन्त्यमा माछा त माछाकै वासनामा ढिडोसरी फत्कियो । म भने केही सङ्कोच मान्दै लुकाउँदै कचौराले छोप्दै राख्न लागेंँ । एकै छिनमा ठाकु आइपुग्यो र भन्यो : “माइली आँ, ए माइली आँ” (मेरी सासूलाई माइली आँ र ससूरा बुबालाई माइला बाको सम्बोधनले बोलाउँदा रहेछन् । “किन बोलाइस् ए ठाकु अघि फुत्त गइछस् थाहै भएन । माछो पकाइदिन्थिस् कि भनेको झन् ऊ त…” ठाकुले हाँस्दै भन्यो : “भाउजूलाई आउला नि त होइन भाउजू ? हजुरलाई आउँथेन र ?” मैले अलि नजिक पुगेर खाँदै गरेको माछो देखाउँदै भनेँ : “हेर्नुस न बाबु यस्तो भयो । हा हा हा ।” ऊ फेरि हाँस्न थाल्यो । म भने चूपचाप बसेँ । ऊ भन्दै गयो “ठिकै छ भाउजू अर्कोपल्ट पकाएर नै खुवाउँछु । अनि पकाउन पनि सिकाउँछु ल ।”
यही सिलसिलामा ठाकु मलाई सोध्दै थियो : “हजुरले धेरै पढ्नुभएको छ रे हो भाउजू ?” हो बाबु आफू नपुगेको कक्षा धेरै लाग्दो रहेछ । मैले डिग्री पास गरेकी छु । “ओहो भाउजू त …आम्मामा..” उसले जिब्रो निकाल्यो र लामो सास तान्दै आश्चर्य चकित बन्यो । उसकी आमा भन्न थालिन् :
मेरी सासुआमा पनि सँगै भएकोले ठाकुको आमाको कुरामा सही थप्दै भन्नुभयो : “हो त मोरा ।”
एवम् रीतले दिनहरू बिते । एकाएक मेरो उहाँले बोलाएकाले काठमाडौँ जानुपर्ने भयो । त्यो दिन केही भएन । भोलिपल्ट उहाँको छोराको आग्रहमा केही कोसेलीपात सहित बुबाले गाडी चढाएर काठमाडाँै पठाउने तयारी गर्नुहुँदै थियो । ठाकुु आएर भन्यो : “हजूर सहर जाने ? अब कहिले आउने भाउजू ?” मैले हाँस्दै भनेँ – “तपाईंले एस.ई.ई. पास गरेपछि लिन आउँछु है । अल्छी नगरी पढ्नू ।” यति भनेर म घरबाट बिदावारी भई हिँडेँ ।
एकदिन ठाकुले मलाई फोन ग¥यो र भन्यो : “दिदी म पढ्न काठमाडौँ आउँछु, डेरा खोजिदिनुप¥यो ।” म खुसीले गद्गद् भएँ । मेरो गला अबरुद्ध भयो । हर्षाश्रुले आँखा टिलपिल टिलपिल भए । बेहोसी झैँ मानौँ मेरो मनमा केही कुतकुती सलबलायो । म खै कुन दिवास्वप्नामा डुबँे । उसले फेरि भन्यो : “हेलो… हेलो दिदी हेलो” । मैले भनेँ : “पछि कल गर्छु ।”
मैले यी कुरा रविलाई भनेकी थिएँ । “सानू तिमी उसलाई आफ्नै भाइ मान्छ्यौ । उसले पनि मलाई आफ्नै दाइ ठान्छ, एक्लै कोठामा राखेर पाल्ने उसको परिवारको परिस्थिति पनि छैन, उसको बाको पनि त जाबो फर्निचरको काम छ कति न धान्ला र ? बरु उसले नोकरी नपाएसम्म यहीँ राख्दा तिमीलाई के लाग्छ ?” मलाई रविको यो प्रश्नले छक्क बनायो । उहाँको यस्तो विचार त मलाई के खोज्छस् कानो आँखो भइहाल्यो र मैले भनेँ : “हुन्छ ।”
एकाएक ठाकु दशैँको नवमीका दिन म कहाँ आयो र भन्यो : “दिदी म आमाबुबाको एक्लो छोरो, मानुँ भने पनि त मेरो पढाइ सकिएको छैन, … भनुँ कि नभनुँ खै दिदी ?”
मैले उसको कुरा बुझिसकेकी थिएँ । “भाइको मुबाइलमा अलि बेसी फोन आउँछ” दाइ कहिलेकाँही भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । मैले झल्याँस्स सम्झेँ र ठाकुलाई भनेँ :“तिमीले मनले खाएकी कोही छ भने म कुरा मिलाइहाल्छु नि बाबु ।” उसले हाँस्दै भन्यो : “मेरी दिदी कति छिटो कुरा बुझ्नुहुन्छ है ।” सामान्य जोरजाम गरियो, दुबै पक्षबाट अनि रिनासँग ठाकुको बिहे भयो ।
रवि भन्दै थिए : “फेसबुकमा हेरेको ठाकुले पनि छोरो पाएछ । मलाई बोलाउँदै थियो । दाइ, हस्पिटल आउनुहोला भनेर ।” “रिनाको के छ रे ?” मैले हडबडाउँदै सोधेँ : “उनी ठीक छिन् रे नर्मल भयो रे ।”
रिना भन्दै थिइन् ः “दिदी ठाकुको राम्रो जागिर छैन । डेराको बस्ती जहान बढ्यो । मलाई त टेन्सन भाको छ ।” मैले भनेँ : “यस्तो बेलामा आत्तिनुहुन्न । धेरै सोच्नु पनि हुन्न । आराम गर । केही समस्या भए भन ।” “अहिले त छैन दिदी” उनले भनिन् । ठाकु जस्तै रहेछ, बाबु खाइलाग्दो, रहरलाग्दो देखिएको ।
भोलिपल्ट दाजुसँग ठाकु भन्दै थियो रे : “हजुरसँग बस्दा बचाउन जानिनँ, अब कमाउन सकिनँ दाजु ।” उसले दाजु भाउजूसँगको बसाइ र अहिलेको बसाइमा धेरै फरक भएको र जिम्मेवारीले थिचेको कुरा गदै थियो रे ! भाउजूलाई बारबार सम्झिएँ र पनि केही गर्न सकिनँ भन्दै थियो रे । बोडिङ पढाउन थालेको पछि तलब थोरै भनेर छाडिदिएँ । अर्को स्कूलमा भ्याकेन्सी खुलेको तर गाउँकै वडा अध्यक्षको बुहारी राखेको र आफूलाई नदिएको कुरा पनि सुनाउँदै थियो रे । अरू केके पनि ।
मैले सोधेँ : “स्कुल के भो ? शिक्षक सेवा के भो ? तयारी गरेर परीक्षा देऊ भनेको होइन ? किन आतुर विदेशिन ? ठाकु भन्दै गयो : “दिदी लोक सेवा पनि कति दिएँ । शिक्षक सेवामा पनि दिएँ । अनि आफैँले व्यापार गर्छु भनेर किराना पसल पनि खोलेँ । केही गर्दा नि भएन जतासुकैबाट डुबेँ । हरेक साल लोक सेवामा राजस्व चढाउने काम भयो । अस्थायी शिक्षकका आन्दोलनले पनि दिएको परीक्षाको नतिजा कुर्न नसक्ने भएँ । दिदी म त मगरको छोरा पढेर जागिर गर्न त सकिनँ, घरतिर पनि त गरिखाने ठाउँ छैन । पहिले पढ्न बुद्धि आएन । गाउँमा माछा मारेर अनि रातदिन खोलामा डुबेर यसै दिन बिते । जब हजुरसँग मेरो भेट भयो अनि हजु्रको प्रेरणाले यतिसम्म आएँ । एस.ई.ई. मा पनि राम्रो ग्रेडिङ आएन । पछि घरबारे बनेँ । सोचेको खर्चले पुगेन त के गरौँ दिदी ? राजनीति गरौँ त ढाँट्न सक्दिनँ । पैसाले रातारात मान्छे किन्न सकिन्नँ । अब सरकारी स्कुलतिर जाऔँ भने पनि भएका ती अस्थायीको हालत देख्दा दिक्क लाग्छ । पटक पटक लोकसेवाले धोका दिन्छ । अब विदेसिने सोच गरेँ मैले त ।”
यो सुनेर म प्याकप्याक बनेँ मानाँै म १० दिनदेखि तिर्खाएकी छु । शब्द आएन मुखबाट मनदेखि विदेश जानुहुन्न भन्न नि सक्दिनँ । उसको विचार बदल्न पनि उचित ठानिनँ । मैले पनि एम.एड. गरेर के गरेकी छु र ? लोक सेवा दिन्छु त कहिले के, कहिले के । हरेक साल प्रश्न र उत्तरको तालमेल बिग्रन्छ । निरास हुन्छु । बोडिङ पढाऔँ त सरकारी तलबको एकतिहाइ तलब र काम तीन तिहाइ बढी हुन्छ । खै के गरौँ ? आफ्नो परिस्थिति यस्तो छ ।
चुरा पोते किन्न रविकै मुख ताक्नुपर्छ । हरेक कुना र कप्चेरामा हरेक दुना र टपरीमा आफ्नाकै आफन्त र चाकरीबाजका खेल छन् । मैले पनि उसले गरे जति नगरेकी कहाँ हुँ र ? यदि म पनि पुरुष भएकी भए उसको परिस्थितिले मलाई बाँधेको भए म पनि विदेसिन्थे पक्कै ।”
ठाकुको फोनले म झस्किएँ र भनेँ : “ए ल म फोन गरेर सोधिदिउँला ।”
कुलमान घिसिङको नियुक्ती हुने
पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको घरमा प्रेसर बम विष्फोटको जिम्मा विप्लवले लियो ।
नेकपा बैठकमा अध्यक्ष ओली किन बाहिरिए ?
राम्रो सम्भावनाकी गायिका तृष्णा खड्का